Malagasy sy Maorisiana: Tsy hifankatia mihitsy!
2007-08-28 @ 15:11 in Spaoro
Mbola akon'ny lalaon'ny nosy ihany ity ambarako ity nefa dia misy ifandraisany amin'ny sehatra hafa! Ny fifankatiavana na fifandraisana amin'iero nosy roa azo heverina ho mifanakaiky saingy toa mifampianjonanjona no holazaiko etoana.
Eo amin'ny fijery malagasy dia nosy telo no tena mifaninana, isika sy ny Maorisiana ary ny Reinoney. Eo amin'ny taranjam-panatanjahantena heverina fa atahorana ny Reinoney dia mirona manohana ny Maorisiana ny mpijery malagasy amin'ny ankapobeny. Raha ny Maorisiana indray no atahorana kokoa dia ny Reinoney no tohanan'ny maro kokoa amin'ny Malagasy. Ireo malagasy manambady frantsay kosa moa dia maro amin'izy ireo no manohana kokoa ny Reinoney noho ny malagasy aza. Asa inona no antony fa zavatra hitako teny ampijerena lalao io aloha.
Ankoatra izay indray dia misy ihany koa ny maro amin'ny mpijery ka manana olona akaiky miasa amin'ny Maorisiana no tsy mety hanohana maorisiana mihitsy. Ny antony dia mpanivaiva gasy loatra ny maro amin'ireo mpifehy teratany Maorisiana. Izaho manokana moa dia miaina mihitsy izany hoe na dia iray trano iasana izao aza dia toy ny fady azy mihitsy ny hamaly ny arahabako na dia miezaka ny miarahaba azy aza aho indraindray. Taty aoriana moa dia tsy misy miresaka eo na mety hifandona eo antokotanim-piasana aza.
Etsy ankilan'izay dia mihevitra ireo delegasiona Maorisiana fa mitongilana ho amin'izay mifanandrina amin'ny maorisiana hatrany ny mpitsara malagasy. Dia nisy moa tamin'ny taranja ady totohondry niditra an-tsehatra mihitsy ny minisitra maorisiana fa heveriny ho mifanafin-keloka (miray tsikombakomba) ny Malagasy ny ny Reinoney. Ny olana moa dia tsy nisy sary naseho mihitsy mampiharihary ny tsy rariny nataon'ny andaniny na ny ankilany. Tsy hita intsony izay manana ny rariny.
Izay no heverin'ny mpanaraka ny baolina fandaka lalao famaranana fa mamaly faty ilay mpitsara Maorisiana namely ny ekipam-pirenena malagasy nandritra ny lalao ka nahararaka antsika tsy hahazo ny medaily volamena. NIvandravandra tamin'ny mpanao gazety rehetra ilay fomba fitsara saingy ny mpitsara ihany moa no masi-mandidy farany. Lesoka ho an'ny malagasy koa moa ny tsy mba fahaizana mitifitra penalty hatramin'izay nijereko baolina ka fantatro avy hatrany fa ny Reinoney no handrombaka azy raha vao tonga izay sehatra izay.
Tsy dia nitsikera be fahatany ny mpilalao na mpanazatra malagasy intsony ny mpijery rehefa vita ny lalao fa kakay sy lonilony amin'ny Maorisiana no nentina nody. Tsy ho rahampitso noho izay no hisy fihatsarany ny fifandraisana eo amin'ny malagasy sy ny maorisiana.